Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada AMISOM oo maydkiisa laga helay Xerada Xalane | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada AMISOM oo maydkiisa laga helay Xerada Xalane
Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada AMISOM oo maydkiisa laga helay Xerada Xalane
(Muqdisho) 08 Sebt 2019 – Waxaa gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho laga helay maydka sarkaal ka tirsanaa Booliska AMISOM, gaar ahaan kuwa Uganda.
Sarkaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay Edward Bagonza, sida uu warqaadka Pmldaily u sheegay Grace Turyagumanawe oo ka tirsan isla AMISOM.
Weli lama caddaynin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dilkiisa, balse waxa uu sarkaalku sheegay in isagoo oo aan nuuxsanaynin laga helay guri uu ka deganaa xerada Xalane oo ah Taliska Guud ee ciidamada Nabad Ilaalinta Ururka Midowga Afrika ee AMISOM.
Ma aha markii ugu horreysay ee mayd saraakiil laga helo gudaha Xalane, iyadoo ay horay halkaa iskugu dileen askar kala duwan, balse lama cadda in uu sarkaalkani is diley iyo in kale.
Uganda waa dalka ciidamada ugu badan ku qaaraama howlgalka AMISOM, waxaana haatan durba la bilaabay agaasinka duugta sarkaalka geeriyoodey.
Previous articleWaa maxay ujeedka shirka ka furmay magaalada Baydhabo?
Next articleGoogle iyo Apple oo lagu qabtay arrin khiyaano ah (Fadlan iska jir)